Sawirro: Caleema Saarka Madaxweynaha Hirshabelle iyo Madaxdii ka qeybgashay | SAHAN ONLINE
Sawirro: Caleema Saarka Madaxweynaha Hirshabelle iyo Madaxdii ka qeybgashay
JOWHAR – Munaasabad ballaaran oo lagu caleema saarayey Madaxweynaha Dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa maanta lagu qabtay magaalada Jowhar.
Xafladda Caleema Saarka ayaa waxaa ka qeybgalay Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Kheyre,Madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka,Guddoomiyaha Aqalka sare,Wasiiro,Xildhibaano,wakiilka QM,wakiilo ka socday Midowga Afrika,Safiirka Turkiga ee Soomaaliya iyo marti sharaf kala duwan.
Mas’uuliyiintii ka qeybgashay munaasabada ayaa ugu hambalyeeyey uguna soo duceeyey Madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare,waxayna dhammaan madaxdii qudbadaha ka jeediyey ka hadleen qaraxii 14kii bishan ka dhacay magaalada Muqdisho,waxay ku baaqeen in meel looga soo wadajeesto la dagaalanka Al-Shabaab.
Waxay ugu baaqeen Madaxweynaha Hirshebelle in uu si cadaalad ah ugu shaqeeyo shacabkiisa kuna dadaallo sidii dhinac Beeraha horumar uga gaari lahaa maadaama wax soo saarka dalka.
Madaxweynaha la caleema saaray ee Hirshabelle Mr Waare ayaa u mahadceliyey madaxdii kasoo qeybgashay caleema saarkiisa,wuxuuna ballan qaaday in uu ka shaqeyn doono sidii bulshada uu uga shaqeyn lahaa si cadaalad ah ,isla markaana u horumarin lahaa dowlad goboleedka Hirshabelle.